အ၀တ်အထည်ဆိုင်ရာ အီဒီယမ်များ (အပိုင်း - ၂) - Myanmar Network
အ၀တ်အထည်ဆိုင်ရာ အီဒီယမ်များ (အပိုင်း - ၂)
Posted by Betty on July 24, 2015 at 11:04 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၂၉။ Keep something under your hat = ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောနှင့် (ကိစ္စတစ်ခုခုအား လူအများသိစေလိုခြင်းမရှိပါက သတိပေးပြောဆိုသောအသုံး)။
E.g I've got something to say to you. But keep it under your hat – it’s not public knowledge. (ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောနဲ့ အဲဒါကလူအများသိတဲ့ အကြောင်း အရာမဟုတ်ဘူး။)
၃၀။ Take your hat off to someone = တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လေးစားခြင်း။
E.g I really take my hat off to people who work full time and study at the same time! (တစ်ချိန်တည်းမှာ အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ပြီးပညာသင်နေတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော်တကယ်ပဲလေးစားတယ်ဗျာ။)
၃၁။ Tied to his/her mother’s apron strings = အမေ့စကားနားထောင်တဲ့သားသမီး/ အမေ၏ဩဇာအောက်တွင်ရှိသော သားသမီး
E.g “He didn't want to come out last weekend because his mother disapproves of us. He’s really tied to her apron strings. (သူ့အမေက ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကို သဘောမတူတဲ့အတွက် ပြီးခဲ့တဲ့စနေ၊ တနင်္ဂနွေကသူအပြင် မထွက်ချင်ခဲ့ဘူး။ တကယ့်ကို သူ့အမေချစ်စကားကိုနားထောင်တာပဲ။)
၃၂။ Keep something up your sleeve = နောင်အခါအတွက်တစ်စုံတစ်ခုကို ၀ှက်ထားခြင်း။
E.g. We've been negotiating my new pay and conditions but I've kept the other job offer up my sleeve for the time being. (ကျွန်တော့်လစာသစ်နဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို ညှိနှိုင်းနေကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခြားအလုပ်တစ်ခုက ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတော့ လောလောဆယ်လျှို့ဝှက်ထားတယ်။)
၃၃။ All talk and no trousers = စကားအများကြီးပြောပြီး လက်တွေ့အားဖြင့် ဆောင်ရွက်မပေးတဲ့သူ။ လေကြီးသူ။
E.g. I know he told you that he would get youalimousine for the wedding. Don't believe him, though. He's all talk, no trousers. (မင်္ဂလာဆောင်အတွက် မင်းကို သူ ဇိမ်ခံမှန်လုံကားကြီးပေးမယ်လို့ ပြောမှန်း ကျွန်မသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကို မယုံနဲ့နော်။ သူက အပြောသာရှိပြီး လက်တွေ့မလုပ်တဲ့သူ။)
၃၄။ Hot under the collar = တစ်စုံတစ်ရာနဲ့ပတ်သက်၍ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခြင်း/ဒေါသထွက်ခြင်း/ မကျေမချမ်းဖြစ်ခြင်း။
E.g. He gets really hot under the collar about cruelty to animals – he can't stand seeing animals suffer. (တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် သူ အရမ်းဒေါသထွက်တာပဲ။ တိရစ္ဆာန်တွေ ဒုက္ခရောက်တာကို သူ သည်းမခံနိုင်ဘူး။)
၃၅။ It's pants (UK slang) = အလကားပါ၊ သုံးစားလို့မရပါဘူး (တစ်စုံတစ်ခုအား မကောင်းဘူးဟုထင်ကြောင်း၊ အထင်မကြီးကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါတွင် သုံးသည့် ဗြိတိသျှဗန်းစကား ဖြစ်သည်)။
E.g. "What did you think of the film?" "Pants!" (ရုပ်ရှင်ကို ဘယ်လိုသဘောရလဲ? အလကားပါ!)
၃၆။ Get something under your belt = တစ်စုံတစ်ရာကို ရယူ အောင်မြင်သည်။
E.g. I'm really glad I passed the driving test. Now I've got that under my belt, I can relax foralittle while. (ကျွန်တော် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အတွက် အမောင်းစစ်ဆေးမှုကို အောင်ခဲ့တာ တကယ့်ကို ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ အခု အဲဒါကို အောင်မြင်သွားပြီိဆိုတော့ ခဏလောက်တော့ အသက်ရှူချောင်ပြီပေါ့။)
၃၇။ Belt up = တိတ်တိတ်နေစမ်း၊ သိပ်မဆူကြနဲ့၊ ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်း။
E.g. What's all that noise? Just belt up, would you? I can't hear myself think. (အဲဒါတွေက ဘာသံတွေလဲ? တိတ်တိတ်နေကြစမ်း။ [ဆူနေလို့] ကိုယ့်အတွေးတောင် ကိုယ်မကြားရဘူး။)
၃၈။ The boot's on the other foot = ယခင်အခြေအနေနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။
E.g. Now that she has been promoted, the boot's on the other foot! You should watch what you say from now on. (အခု သူက ရာထူးတိုးသွားပြီဆိုတော့ သူ့မှာ အခွင့်အရေးတွေ ရသွားပြီ။ အခုအချိန်ကစပြီး ရှင် အပြောအဆို သတိထားသင့်တယ်။)
၃၉။ Get your skates on = မြန်မြန်လုပ်။
E.g. Get your skates on – we're late as it is! (မြန်မြန်လုပ်။ အခုတောင်မှ နောက်ကျနေပြီ။)
၄၀။ In only the clothes he stood up in = အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခု။
E.g. After the fire, they were left with only the clothes they stood up in. (မီးလောင်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့မှာ အ၀တ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုပဲ ကျန်တော့တယ်။)
၄၁။ shirty = စိတ်တိုသည်၊ ဒေါသဖြစ်သည်။
E.g. Don't get shirty with me! I'm only reporting the new rules. (ကျွန်တော့်ကို ဒေါသမဖြစ်နဲ့လေ။ ကျွန်တော်က စည်းကမ်းအသစ်တွေကို ပြောပြတာပဲရှိတယ်။)
၄၂။ Skirt around the issue = အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို တိုက်ရိုက်မပြောဘဲ ရှောင်ကွင်းပြောခြင်း။
E.g. They skirted around the issue forawhile, then got down to the real business. (တစ်ခဏတော့ သူတို့က ပြဿနာကို ရှောင်ကွင်းနေကြတယ်။ ပြီးတော့မှာ တကယ့်အလုပ်ကိစ္စကို စကြတယ်။)
၄၃။ Cloak and dagger = ပဟေဠိဆန်သော၊ လျှို့ဝှက်သော (လျှို့ဝှက်ချက်များ၊ သူလျှိုများပါဝင်သော သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းများ အကြောင်းပြောဆိုရာတွင် သုံးလေ့ရှိသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်)။
E.g. Who's arranging the party? I don't know – it's all very cloak and dagger at the moment. (ဘယ်သူက ပွဲကို စီစဉ်နေတာလဲ? ကျွန်တော် မသိဘူး။ အခုလောလောဆယ်တော့ ပဟေဠိဆန်နေသေးတယ်။)
၄၄။ Give someoneadressing down = တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းခြင်း။
E.g. He gave the whole departmentadressing down after they failed to meet their agreed targets. (လျှာထားချက်တွေ ဖြည့်မှီခြင်းမရှိတဲ့အတွက် သူက ဌာနတစ်ခုလုံးကို ပြစ်တင်ကြိမ်း မောင်းပါတယ်။)
English-at-home.com မှ Clothing idioms ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂၉။ Keep something under your hat = ဘယျသူ့ကိုမှပွနျမပွောနှငျ့ (ကိစ်စတဈခုခုအား လူအမြားသိစလေိုခွငျးမရှိပါက သတိပေးပွောဆိုသောအသုံး)။
E.g I've got something to say to you. But keep it under your hat – it’s not public knowledge. (ခငျဗြားကို ကြှနျတျောပွောစရာရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျသူ့ကိုမှပွနျမပွောနဲ့ အဲဒါကလူအမြားသိတဲ့ အကွောငျး အရာမဟုတျဘူး။)
၃၀။ Take your hat off to someone = တဈစုံတဈယောကျကို လေးစားခွငျး။
E.g I really take my hat off to people who work full time and study at the same time! (တဈခြိနျတညျးမှာ အခြိနျပွညျ့အလုပျလုပျပွီးပညာသငျနတေဲ့လူတှကေို ကြှနျတျောတကယျပဲလေးစားတယျဗြာ။)
၃၁။ Tied to his/her mother’s apron strings = အမစေ့ကားနားထောငျတဲ့သားသမီး/ အမေ၏ဩဇာအောကျတှငျရှိသော သားသမီး
E.g “He didn't want to come out last weekend because his mother disapproves of us. He’s really tied to her apron strings. (သူ့အမကေ ကြှနျမတို့နှဈယောကျကို သဘောမတူတဲ့အတှကျ ပွီးခဲ့တဲ့စနေ၊ တနင်ျဂနှကေသူအပွငျ မထှကျခငျြခဲ့ဘူး။ တကယျ့ကို သူ့အမခေဈြစကားကိုနားထောငျတာပဲ။)
၃၂။ Keep something up your sleeve = နောငျအခါအတှကျတဈစုံတဈခုကို ၀ှကျထားခွငျး။
E.g. We've been negotiating my new pay and conditions but I've kept the other job offer up my sleeve for the time being. (ကြှနျတေျာ့လစာသဈနဲ့ ရပိုငျခှငျ့ကို ညှိနှိုငျးနကွေတယျ။ ဒါပမေဲ့ တခွားအလုပျတဈခုက ကမျးလှမျးခကျြကိုတော့ လောလောဆယျလြှို့ဝှကျထားတယျ။)
၃၃။ All talk and no trousers = စကားအမြားကွီးပွောပွီး လကျတှအေ့ားဖွငျ့ ဆောငျရှကျမပေးတဲ့သူ။ လကွေီးသူ။
E.g. I know he told you that he would get youalimousine for the wedding. Don't believe him, though. He's all talk, no trousers. (မင်ျဂလာဆောငျအတှကျ မငျးကို သူ ဇိမျခံမှနျလုံကားကွီးပေးမယျလို့ ပွောမှနျး ကြှနျမသိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ကို မယုံနဲ့နျော။ သူက အပွောသာရှိပွီး လကျတှမေ့လုပျတဲ့သူ။)
၃၄။ Hot under the collar = တဈစုံတဈရာနဲ့ပတျသကျ၍ စိတျမခမျြးမသာဖွဈခွငျး/ဒေါသထှကျခွငျး/ မကမြေခမျြးဖွဈခွငျး။
E.g. He gets really hot under the collar about cruelty to animals – he can't stand seeing animals suffer. (တိရစ္ဆာနျတှအေပျေါ ရကျစကျကွမျးကွုတျခွငျးနဲ့ပတျသကျရငျ သူ အရမျးဒေါသထှကျတာပဲ။ တိရစ္ဆာနျတှေ ဒုက်ခရောကျတာကို သူ သညျးမခံနိုငျဘူး။)
၃၅။ It's pants (UK slang) = အလကားပါ၊ သုံးစားလို့မရပါဘူး (တဈစုံတဈခုအား မကောငျးဘူးဟုထငျကွောငျး၊ အထငျမကွီးကွောငျး ပွောဆိုသညျ့အခါတှငျ သုံးသညျ့ ဗွိတိသြှဗနျးစကား ဖွဈသညျ)။
E.g. "What did you think of the film?" "Pants!" (ရုပျရှငျကို ဘယျလိုသဘောရလဲ? အလကားပါ!)
၃၆။ Get something under your belt = တဈစုံတဈရာကို ရယူ အောငျမွငျသညျ။
E.g. I'm really glad I passed the driving test. Now I've got that under my belt, I can relax foralittle while. (ကြှနျတျော ယာဉျမောငျးလိုငျစငျအတှကျ အမောငျးစဈဆေးမှုကို အောငျခဲ့တာ တကယျ့ကို ၀မျးသာတယျဗြာ။ အခု အဲဒါကို အောငျမွငျသှားပွီိဆိုတော့ ခဏလောကျတော့ အသကျရှူခြောငျပွီပေါ့။)
၃၇။ Belt up = တိတျတိတျနစေမျး၊ သိပျမဆူကွနဲ့၊ ပါးစပျပိတျထားစမျး။
E.g. What's all that noise? Just belt up, would you? I can't hear myself think. (အဲဒါတှကေ ဘာသံတှလေဲ? တိတျတိတျနကွေစမျး။ [ဆူနလေို့] ကိုယျ့အတှေးတောငျ ကိုယျမကွားရဘူး။)
၃၈။ The boot's on the other foot = ယခငျအခွအေနနှေငျ့ ပွောငျးပွနျဖွဈသှားပွီ။
E.g. Now that she has been promoted, the boot's on the other foot! You should watch what you say from now on. (အခု သူက ရာထူးတိုးသှားပွီဆိုတော့ သူ့မှာ အခှငျ့အရေးတှေ ရသှားပွီ။ အခုအခြိနျကစပွီး ရှငျ အပွောအဆို သတိထားသငျ့တယျ။)
၃၉။ Get your skates on = မွနျမွနျလုပျ။
E.g. Get your skates on – we're late as it is! (မွနျမွနျလုပျ။ အခုတောငျမှ နောကျကနြပွေီ။)
၄၀။ In only the clothes he stood up in = အ၀တျတဈထညျကိုယျတဈခု။
E.g. After the fire, they were left with only the clothes they stood up in. (မီးလောငျပွီးတဲ့နောကျ သူတို့မှာ အ၀တျတဈထညျကိုယျတဈခုပဲ ကနျြတော့တယျ။)
၄၁။ shirty = စိတျတိုသညျ၊ ဒေါသဖွဈသညျ။
E.g. Don't get shirty with me! I'm only reporting the new rules. (ကြှနျတေျာ့ကို ဒေါသမဖွဈနဲ့လေ။ ကြှနျတျောက စညျးကမျးအသဈတှကေို ပွောပွတာပဲရှိတယျ။)
၄၂။ Skirt around the issue = အကွောငျးအရာတဈခုခုကို တိုကျရိုကျမပွောဘဲ ရှောငျကှငျးပွောခွငျး။
E.g. They skirted around the issue forawhile, then got down to the real business. (တဈခဏတော့ သူတို့က ပွဿနာကို ရှောငျကှငျးနကွေတယျ။ ပွီးတော့မှာ တကယျ့အလုပျကိစ်စကို စကွတယျ။)
၄၃။ Cloak and dagger = ပဟဠေိဆနျသော၊ လြှို့ဝှကျသော (လြှို့ဝှကျခကျြမြား၊ သူလြှိုမြားပါဝငျသော သဲထိတျရငျဖိုဇာတျလမျးမြား အကွောငျးပွောဆိုရာတှငျ သုံးလရှေိ့သညျ့ စကားလုံးဖွဈသညျ)။
E.g. Who's arranging the party? I don't know – it's all very cloak and dagger at the moment. (ဘယျသူက ပှဲကို စီစဉျနတောလဲ? ကြှနျတျော မသိဘူး။ အခုလောလောဆယျတော့ ပဟဠေိဆနျနသေေးတယျ။)
၄၄။ Give someoneadressing down = တဈစုံတဈယောကျကို ပွဈတငျကွိမျးမောငျးခွငျး။
E.g. He gave the whole departmentadressing down after they failed to meet their agreed targets. (လြှာထားခကျြတှေ ဖွညျ့မှီခွငျးမရှိတဲ့အတှကျ သူက ဌာနတဈခုလုံးကို ပွဈတငျကွိမျး မောငျးပါတယျ။)
English-at-home.com မှ Clothing idioms ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Nay Hlwer Phoo on August 2, 2015 at 11:16